Ogaden News Agency (ONA) – Xarunta Dhexe ee JWXO oo Faahfaahin Ka Bixisay Dagaal Xoogan oo ka Dhacay Garbodiino/Baabili
Xarunta Dhexe ee JWXO oo Faahfaahin Ka Bixisay Dagaal Xoogan oo ka Dhacay Garbodiino/Baabili
Posted by ONA Admin	/ February 15, 2015
Wararka naga soogaadhaya wadanka Ogadenia gaar ahaan Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa ka warbixinaya dagaaladii ugu dambeeyay oo ciidamada gumaysiga cashiro waawayn loogu dhigay. Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa si gaar ah uga warbixisay dagaal ciidanka wayaanaha lagu riiqay oo darsi lama ilaawaan ah loogu dhigay, dagaalkaa oo kadhacay deegaanka Garbodiimo oo dagmada Baabili katirsan. Dgaalada aan ka helnay warbixinta ayaa u dhacey sidan;
14/2/15 Garbodiimo oo dagmada Baabili ee Gobolka Faafan katirsan dagaal saacado badan socday oo kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagu tusay awooda iyo khibrada dagaal ee ay CWXO leeyihiin waxaana loogu awood sheegtay ciidanka wayaanaha oo ay u yimaadeen 3 sadex gurmad oo cusub waxayna geesiyaasha JWXO sacabada kaga cabeen dhamaan ciidamadii cadawga waxaana goobta lagaga dilay 35 askari halka dhaawacuna uu ahaa 45 kale.
Deegaankan uu dagaalku kadhacay oo xidh ama howd ah ayaa ah deegaan istaraatiiji ah dhanka dagaalka waxayna JWXO ku laysay dhowr jeer ciidamo gurmad ah oo kuwa wayaanaha ah.
11/2/15 Gudaha Dagmada Shilaabo ee Gobolka Qoraxay dagaal laxaad leh oo CWXO iyo kuwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidanka gumaysiga loogu gaystay khasaare aan lasoo faahfaahinin.
12/2/15 Xadhadhamo oo Dagmada Qabridahare ee Gobolka Qoraxay katirsan dagaal mudo badan socday oo ka dhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare naf iyo maalba leh oo aan faahfaahintiisa lahaynin.
12/2/15 Duudcade oo dagmada Gunagado ee Gobolka Jarar katirsan dagaal ciidanka xooga dalka Ogadenia iyo kuwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidanka cadawga loogu gaystay khasaare aah faahfaahintiisa lahaynin.